Ukuzikhethela: Kulula ukuSebenzisa, amanqaku aMandla okuFumana abaThengi beSiza | Martech Zone
Omnye wabathengi bethu uvuliwe Squarespace, Inkqubo yolawulo lomxholo ebonelela ngazo zonke iziseko-kubandakanya i-ecommerce. Kubathengi benkonzo yokuzenzela, liqonga elihle elinokhetho oluninzi. Sihlala sincomela ukusingathwa kweWordPress ngenxa yamandla ayo angenamda kunye nokuguquguquka… kodwa kwi-squarespace ekhethekileyo lukhetho oluqinisekileyo.
Ngelixa i-squarespace iswele API kunye nezigidi zokudityaniswa kwemveliso ezikulungeleyo ukuhamba, usenakho ukufumana izixhobo ezintle zokuphucula indawo yakho. Sinomthengi omnye owayejonge ukufaka ii-popup kwindawo yakhe ukubongoza abasebenzisi ukuba babhalise kwincwadana yakhe. Sifumene isisombululo esiqinileyo kwi Ikratshi.
Iimpawu eziBalulekileyo zibandakanya
Tsala kwaye ulahle uMyili -Khetha kwiindidi ezininzi zokubonisa indawo ezibandakanya iipopu, iibhena, imivalo, iifloutout, iifom ezifakiwe, iphepha lokufika, izinto ezibangela ithebhu kunye namaphepha enkosi. Unokwenza ngokulula amava okuguqula angena kwindawo yakho esele ikhoyo kunye negama. Okanye unokwakha iphepha lokufika elibanjelwe ukuhanjiswa kwentlalo okanye okuhlawulelwayo.
Ujoliso Ithagethi esekwe kwinjongo yokuphuma, ijografi, ixabiso lenqwelo, indlela yokudlulisa, uhlobo lwesixhobo kunye nokunye.
Iikhowudi zekhuphoni -Misela kwaye utyhile usetyenziso olunye okanye iikhowudi ezininzi zekhuphoni emva kokungena. Nokuba uvumela abasebenzisi ukuba bakhuphe izibonelelo kwiifowuni zabo ngelixa betyelele ivenkile yakho yezitena nodaka.
Unxibelelaniso -Ngqamanisa abafowunelwa abatsha ngexesha lokwenyani kwintengiso yakho ye-imeyile, i-CRM, i-ecommerce okanye iqonga lokuphinda ujonge. Hlanganisa ngokunyanisekileyo imikhankaso ye-Privy kunye nokuhamba komsebenzi okhoyo kunye nenkxaso yokungena kabini, iinkalo zesiko kunye namacandelo.
Ukudityaniswa kubandakanya i-Shopify, i-squarespace, iMagento, i-ecwid, iBigcommerce, i-Weebly, i-WordPress, Hubspot, Tumblr, Joomla, Zen Cart, Ukulangazelela, 3dcart, Spacecraft, Mailchimp, ConstantContact, Mailerlite, Emma, ​​Infusionsoft, Drip, ConvertKit, GetResponse, SendinBlue, ActiveCampaign, Mailigen, Soundest, Benchmark, Delivra, CampaignMonitor, ConvertKit, AWebert, Customer.io, Bizzy, Klaviyo, Drip, Bizzy, Mailup, inbox, Mad Mimi, dotmailer, Feedblitz, Freshmail, Remarkety, Fishbowl, iLoyal, Slack kunye neAdroll.
Ungaliphumeza njani iphulo lakho lokuqala lokuziLungisa
Nanku ukuhamba kwemizuzu emi-4, apho uPrivy athetha nawe ngamanyathelo asisiseko okuyila iphulo lakho lokuqala.
kunye Amaxabiso aZimeleyo ufumana ukufikelela kuyo yonke indawo ekuboniswa kuyo kwindawo, ukudityaniswa, kunye nodidi lokubonisa ngexabiso elinye! Ubungangamsha balinganisa intsimi kubo bonke abathengisi, ngaphandle kohlahlo-lwabiwo mali ukuze bafumane esona sixhobo sokuguqula kwimarike.
Ufumana ntoni? Oko kuthetha ukuba yonke imithetho ekujoliswe kuyo, indawo yokugcina iinqwelo, amaphulo e-upsell, amaphulo okuphumelela, iikhowudi zekhuphoni ezizodwa, ukungena kwe-HTML, uyilo lwento, uvavanyo lwe-A / B, ukudityaniswa komthunywa we-facebook, ukufaka iifonti zesiko, kunye nokuphuma uqhagamshelo lwebhokisi kuyo yonke ingqokelela yeteknoloji yakho. ”
tags: 3dcartActiveCampaignintengisoUAwebertNiseloBigCommerceBizzyIphulo loMhloliUnxibelelwano rhoqoGuqula iKitctaUmthengi.iodelivradotmailerukuthontsizaUmnqwenoEcwidEmmainjongo yokuphumaI-FeedblitzIntlanziIfayile entshaGetResponsehubspotiLoyalInfusionsoftkwibhokisi engenayoJoomlaKlaviyomaphephaNdinguMimiMagentomailchimpIposiMailigenIposiokupoqayoliweyoUkumangalisaSendinBluethengaMusaIsandiIsixhobo sendawosquaeveraceTumblrewebhuWordPresskwinqwelo Zen
Lumkela umkhonyovu we-InPalice yobhaliso lweDomain